Hyundai Service Center စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး Hyundai ကားများအတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။
Hyundai Brand New ကားများအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရောင်းချလျက်ရှိသည့် Hyundai Motor ၏ ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ 3S (sales, service, spare parts) Showroom တွင် Hyundai Service Center အား နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးမျိုးအား ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် Hyundai…
Hyundai Motor has come with Brand New Cars
Hyundai has opened its 3S showroom on 31st August, 2013. This will be the first showroom of Hyundai for Myanmar and operated by Kolao & Fortune International as joint venture. As one-stop service, Hyundai's 3S showroom offering sales, service & spare parts center altogether at one place. This is the biggest Hyundai showroom in Asia-Pacific region and total floor…
ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး ကားကုမ္ပဏီ Hyundai Motor မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး 3S (sales, service, spare parts) Showroom စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း
Hyundai Motor မှ ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ 3S (sales, service, spare parts) Showroom အား သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ゞင်းမှာ Hyundai ကားများအား တရားဝင် တင်ပို့ရောင်းချမည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော…